Tena mila mianatra ny teny Japoney ve ianao vao afaka miaina ao Japana? · Global Voices teny Malagasy
Eny, tena tsy maintsy, hoy ireo vahiny monina ao Japana
Voadika ny 30 Aogositra 2019 17:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, bahasa Indonesia, Español, Français, русский, polski, Português, عربي, English
Io bitsika resahana io dia mifandray aminà fandinihana ny boky vaovaon'i Pico Iyer tao amin'ny New York Times, dia tsy inona izany fa ny “Autumn Light”. Mpanoratra lahatsoratra fohy fanta-daza sady mpanoratra momba ny fivahinianana i Iyer, izay nipetraka tsindraindray tao Japana tanatin'ny 25 taona lasa.
Araka ny voalazan'ny mpamoaka ny asasoratr'i Iyer, natao ho “famakivakiana lalina ny tantaran'i Japana sy ny kolontsainy ary koa ho fandefasana eritreritra mampihetsi-po amin'ny tsy faharetana, ny fahafatesana, ary ny alahelo” io boky vaovao io.
Misy zavatra mifono fiarovana ihany koa amin'ny fihetsiky ny mponina maharitra manoloana ny fanoratan'ny hafa momba an'i Japana. Ireo zavatra efa miverimberina foana taterina tsy an-kiato anatin'ny media Tandrefana momba ny tsy fanaovan'ny Japoney firaisana ara-nofo na ny fahapoizinan'ny ranomasina Pasifika noho ireo toby famokarana angovo nokleary ao Fukushima dia saika harabirabiana sy ravaravaina ao amin'ny Twitter sy Facebook avokoa.
Nanao hala-tahaka esoeso ny antanantohatra ara-piarahamonina sarotra takarina misy ireo vahiny ao Japana ny mpampiasa Twitter @deivudesu, anatinà kisary maro be mpizara izay, na dia maneso aza, dia mampiseho tsotra izao ny lanjan'ny saranga.
“Iza no manambany an'iza anatin'ny vondrompiarahamonin'ny vahiny ao Japana.” Sary an'ilay mpampiasa Twitter @deivudesu, tsy azo halain-tahaka raha tsy nahazoan-dàlana.
Kanefa arakaraka ny naha-tolona ny nahazoantsika ny tantara nianarantsika momba ny firenena, no ahatongavan'ny sasany amintsika saina fa toy ny mahazatra ihany ny fiainana ao Japana. Indrindra ireo sôkôlà Kitkat, ireo milina mpivarotra, ireo tempoly Zen, ary ireo toerana fandraisambahiny kapisily sy ireo fiarandalamby mizotra ara-potoana dia mifangaro anatin'ny tontolo ary tena tsy tsikaritra mihitsy. Raha ny marina dia mbola ampiasaina lalandava ireo milina mpandefa fax any aminà firenena maro manerana ny tany, fa tsy ao Japana irery ihany. Toa mora ihany ny mandray anjara anatinà kolontsaina heverina ho avy aminà nosy.
Japana 4 ora izay